Banaanbaxyo ka dhashay xukunkii Xusni Mubarik - iftineducation.com
iftineducation.com – Kumanaan dad ah ayaa xalay isugu soo baxay fagaaraxa Taxriir ee magaalada Qaahira, kadib markii maxkamada dalkaasi ay wax danbi ah ku weyday hogaamiyihii hore ee dalkaasi Xunsi Mubaarik.
Ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintay banaanbaxyo xalay ka dhacay Qaahira oo looga soo horjeeday go’aankii maxkamadii siideysay Mubarik.
Mubaarik iyo xubno kamid ahaan jiray dowladiisa ayey ku socotay dacwad la xariirta dilkii loo geystay 850 qof oo ku dhintay kacdoonkii lagu riday xukuumadii Mubarik 2011.
Horey ayey maxkamad ugu xukuntay xukun dil ah Xusni Mubarik, Wasiirkiisii hore ee Arrimaha Gudaha iyo lix xubnood oo kamid ahaa saraakiisha amaanka Masar.
Balse Maxkamada Sare ee wadanka Masar ayaa xukunkaasi ka hortimid iyadoo maxkamadeynta Mubarik dib loo bilaabay.
Maxkamada ayaa subaxnimadii Sabtidii shalay shaaca ka qaaday in lagu waayey wax danbi ah Xusni Mubarik.
Go’aanka maxkamada ayaa keenay banaanbaxyo ka bilowday magaalada Qaahira, shacabka Masar ayaa sheegay in hada ay dib xukunkii uu qabsadeen kooxdii Mubarik.
Shacabka ayaa sidoo kale mudaharaadkooda uga soo horjeeday Madaxweynaha xilka haya Cabdifatax Al-sisi oo isagu inqilaabay dowladii la doortay ee Maxamed Morsi, inqilaabkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 2000 qof.
Xusuusta Waayaha Flimada Hindida Midka ay Soomaalida ugu jeceshay -Daawo